2020 Nakhshadeynta Cusub ee Xawaaraha Sare ee Tooska ah Isukeenista Mashiinka Neefta Foornada Dheer
Mashiinkaani wuxuu si otomaatig ah u hagaajinayaa baaxadda samaynta cabbirrada kala duwan ee keel fudud, istiin iyo dariiqa, Drywall, kanaalka C, U kanaalka, xagalka derbiga. Mashiinka waxaa wada iskiis loo sameeyay Gear Box kaas oo leh saxnaan sare oo aan lahayn buuq. Awood awood u leh inuu dhaqaajiyo guddiga darbiga si uu u hagaajiyo kala duwanaanta ...Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga boostada: Nofeembar-12-2020
Waqtiga: Oktoobar 15th-19th, 2019 Number Booth: 2.1M42 Pavilion: Guangzhou pazhou International Convention and Exhibition Center Cinwaanka: Maya. 382, wadada yuejiangzhong, degmada haizhu, guangzhouAkhri wax dheeraad ah »
25th - 28 th dubai carwadeena Mashiinadeena sameynta qabow iyo alaabta ceeriin ayaa laga door bidaa. Booqo booqashadaada!Akhri wax dheeraad ah »
Carwadii 125aad ee Kanton
Waqtiga: Abriil 15th-19th, 2019 Lambarka Booth: A 1.1K29-30 Taambuugga: Guangzhou pazhou International Convention and Exhibition Cinwaanka: Maya 382, wadada yuejiangzhong, degmada haizhu, guangzhouAkhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha Hindiya waxay soo booqdaan Mashiinka Mashiinka Mashiinka Sameeya ee Joogtada ah
Macaamiisha Hindiya waxay soo booqdaan Mashiinka Mashiinka Mashiinka Sameeya ee Joogtada ah Akhri wax dheeraad ah »
Bandhigga Peru Akhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha Hindiya waxay soo booqataa warshaddeenna si ay u xajiso Mashiinka U samaynta Dabaqa Dabaqa
Macaamiisha Hindiya waxay soo booqataa warshaddeenna si ay u xajiso Mashiinka U samaynta Dabaqa Dabaqa Akhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha Filibiin waxay booqdaan warshaddeena si ay u iibsadaan waxyaabaha
Macaamiisha Filibiin waxay booqdaan warshaddeena si ay u iibsadaan waxyaabaha Akhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha joogtada ah ee Mexico waxay mashiinka u xajistaan ​​warshaddeena
Macaamiisha joogtada ah ee Mexico waxay mashiinka u xajistaan ​​warshaddeena Akhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha India waxay booqdaan mashiinka duudduuban ee C iyo Z pulrin
Macaamiisha India waxay booqdaan mashiinka duudduuban ee C iyo Z pulrin Akhri wax dheeraad ah »
Macaamiisha ciraaq waxay soo booqdaan Light Keel Roll U samaynta Mashiinka warshaddeena
Macaamiisha ciraaq waxay soo booqdaan Light Keel Roll U samaynta Mashiinka warshaddeena Akhri wax dheeraad ah »
Bandhigga Dhismaha & Dhismaha Myanmar
Bandhigga Dhismaha & Dhismaha Myanmar Akhri wax dheeraad ah »